ग्रिनकार्ड एक्सपायर भयो, के ग्रिनकार्ड नविकरणविना नागरिकता आवेदन दिनसक्छु ? « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas
ग्रिनकार्ड एक्सपायर भयो, के ग्रिनकार्ड नविकरणविना नागरिकता आवेदन दिनसक्छु ?
यदि तपाईको ग्रिनकार्ड एक्सपायर भएको छ तर तपाई सबै प्रकारले अमेरिकी नागरिकतालागि आवेदन दिन योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईले ग्रिनकार्ड नविकरण नगरिकनै नागरिकताका लागि आवेदन दिनसक्नुहुन्छ । तर तपाईले ग्रिनकार्ड एक्सपायर भएपछि अमेरिका छाडेको हुनुहुँदैन ।
तपाईको ग्रिनकार्ड हराएको वा चोरिएको पनि हुनुहुँदैन । यदि तपाईको ग्रिनकार्ड हराएको र चोरी भएको छ भने फर्म आई ९० भरेर ग्रिनकार्ड रिप्लेसमेन्ट गरेको हुनुपर्छ । किनभने तपाईले अमेरिकी नागरिकताका लागि सपथग्रहण गर्नेबेलामा तपाईको पुरानो ग्रिनकार्ड बुझाउनुपर्छ, चाहे त्यो एक्सपायर भएको नै किन नहोस् ।
ग्रिनकार्ड हराएको र चोरी भएको सन्दर्भमा तपाईले रिप्लेसका लागि आवेदन दिएपछि तपाईले केही दिनमा नै फर्म आई ७९७ सी प्राप्त गर्नुहुनेछ । उक्त रिसिप्ट पत्रका आधारमा तपाईले अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिन अर्थात् एन ४०० फर्म भर्न सक्नुहुनेछ ।
ग्रिनकार्ड एक्सपायर भएको सन्दर्भमा कुनै आवेदन दिइरहन जरुरी हुँदैन, सिधै अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । तर नागरिकता आवेदनका लागि अरु सबै योग्यताहरु भने पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
युएससीआईएसलाई तपाईले अमेरिकी नागरिकता आवेदन दिंदा अद्यावधिक ग्रिनकार्ड आवश्यक छ ? भनेर सोध्नुभयो भने तपाईले जवाफ पर्छका रुपमा नै पाउनुहुनेछ । तर तपाईले युएससीआईएसलाई एक्सपायर ग्रिनकार्डका साथमा अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ? भनेर सोध्नुभयो भने पनि तपाईले जवाफ सकिन्छ पाउनुहुनेछ ।
युएससीआईएसले एक्सपायर भएको ग्रिनकार्डका आधारमा नागरिकता लिनबाट वञ्चित गर्दैन । तर तपाईले नागरिकताको सपथ लिने बेलामा एक्सपायर भएको ग्रिनकार्ड लिएर जानुपर्छ ।
अमेरिकी अध्यागमनबारेका सम्पूर्ण टिप्सहरु यहाँ पढ्नुहोला ।
यी सामान्य सुझावहरु हुन् । कानुनी सल्लाहका लागि र आफ्नो आवेदनबारे छलफल गर्नका लागि लाइसेन्सप्राप्त कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्नुहोला ।